RASMI: Andrea Agnelli oo ganaax gorodda loo geliyay! (Ku lug lanaashaha dembiyo abaabulan oo lagu helay) – Gool FM
(Torino) 25 Sebt 2017 – Guddoomiya Juventus ee Andrea Agnelli ayaa sanad lagu ganaaxey doorkiisa ku aaddan inuu tigidho ka iibiyay taageerayaal xiriir la leh kooxaha ku kaca dembiyada abaabulan, iyadoo sidoo kale gorodda loo geliyay ganaax lacageed oo gaaraya €300,000.
Go’aankan ayaa imanaya kaddib markii uu dacwad oogaha Giuseppe Pecoraro uu xiriirka FIGC ka dalbaday inay ninkan ganaaxaan muddo 2 sano ah isla markaana ay ku ganaaxaan €50,000.
Pecoraro ayaa sidoo kale soo jeediyay inay Juve laba kulan ku ciyaarto garoon ay albaabadu u xiran yihiin, iyo kulan kale oo laga mamnuucayo taageerayaasha loo yaqaanno Curva Sud.
Waa loo joogaa in xanibaadda la saaray Agnelli ay sidoo kale saamayn karto jagada uu ka hayo dhanka Yurub maaddaama dhowaan loo magacaabay madaxwaynaha Jamciyadda Kooxaha Yurub ee European Club Association (ECA).
Juve oo iska fogeeysey inay wax lug ah ku leedahay dembiyada abaabulan ayaa lagu wadaa inay go’aankan rafcaan ka qaadato maalmaha soo aaddan.
''Horta ma jiraan macallimiin Ingiriis ah oo jooga the Premier League'' - Antonio Conte oo ku dhega hadlay macallimiinta Ingiriiska